နာမည်က ကံကို ဖန်တီးနိုင်ပါသလား – ဗေဒင်သုတ
နာမည်က ကံကို ဖန်တီးနိုင်ပါသလား
December 1, 2018 December 19, 2019 Ak	View : 2679
ဆိုတော့ ပြောရရင် နာမည်သည် ကံကို မဖန်တီးရေးချာ့ မဖန်တီးပါကြောင်းပါဗျာ။ အမည်သညာဟူသည်မှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ် သယ်လာခဲ့သော အတိတ် ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးတို့မှ မည်သည့်ဘက်သို့ ဦးတည်နေသည်ကို ထင်ရှားပြနေခြင်းတစ်မျိုးသာလျင် ဖြစ်ပါသည်။
လက္ခဏာပညာရှင်တို့က လက်ဖ၀ါးပေါ်မှ အရေးအကြောင်းတို့ကို ကြည့်ရှုပြီးနောက်…. မည်သည့် အရေးအကြောင်း လက္ခဏာသည် မည်သည့်အကျိုးပေး ၏ သင်္ကေတ အချင်းအရာမျိုးဖြစ်သည်ကို ဝေဖန်သည်ကဲ့သို့လည်းကောင်း……
ဂဏန်းဗေဒပညာရှင်တို့က ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ မွေးရက် ဂဏန်း စသည်တို့ကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးနောက်… မည်သည့် ဂဏန်းကြီးစိုးခြင်းသည် မည်သည့်အကျိုးတရား၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်သည်ကို ဆင်ခြင်ဝေဖန်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း…. နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်တို့က …ဇာတာရှိ စန်းလဂ်၊ ဂြိုဟ်နေ၊ နက္ခတ်စီးနင်းပုံတို့ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးနောက်….. မည်သည့်ဂြိုဟ်မြင်ဂြိုဟ်ယှဉ် ဂြိုဟ်ပူးဂြိုဟ်နေတို့သည် ဆိုင်ရာ ဇာတာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်သယ်လာသည့် မည်ကဲ့သို့သော ကံအကျိုးပေးတို့ ဖြစ်တန်သည်ကို သုံးသပ်သည်ကဲ့သို့လည်းကောင်း…….
အမည်သညာမှည့်ခေါ်ပုံ နှင့် ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန် ၊ နေထိုင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ပုံတို့ကို ဆင်ခြင်ပြီးလျှင်…… ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား အကုသိုလ်ကံ ကြီးစိုးလွန်းသော အမည်ရှင် ၊ ..ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား …ဤအမည်နှင့် ဤအသက်ပိုင်းဖြတ်သန်းသော်…ကောင်းစားမည့် အမည်ရှင်.. စသည်ဖြင့်…
မိုးရွာခါနီးလျင်..ပုရွက်တို့ အမြင့်တက်ခြင်း ၊ ပုတ်သင်တို့ အရောင်စိမ်းခြင်း စသည်ဖြင့်သော လက္ခဏာကို ဆင်ခြင်သကဲ့သို့ ဆင်ခြင် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်လေသည်။ (ဗေဒင်သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင် ဖြစ်သည်။ အခြား Website နှင့် Facebook Page များတွင် ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြခွင့် မပြုပါ)
ထပ်ပြောပါဦးမည်..။ အမည်သည် ကံကို မဖန်တီးပါ။ သယ်လာသော အကုသိုလ်ကံ၊ ကုသိုလ်ကံတို့ထဲမှာ မည်သည့်ကံဘက်ကို ဦးတည်သွားနေသည်ကိုသာ ..အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်ပြနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကောင်းသောအမည်သညာလည်း ရှိ… ကောင်းသော ပြုမူနေထိုင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း ရှိသော သူသည် ကောင်းစားလွယ်၏။ မကောင်းသောအမည်သညာလည်း ရှိ…မကောင်းသော ပြုမူနေထိုင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း ရှိသောသူမှာမူ…အကုသိုလ်ကံ နှိပ်စက်ခံရခြင်း ကြီးမားလျက် ပျက်ဆီးလွယ်ကူလေတော့သတည်း..။
← တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားများအတွက် မြန်မာ့အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာအစီအရင်
နဝင်းဆင့်၍ ဆုတောင်းပြည့်ခြင်း →